अनेसास: दिशानिर्देश – prabhab.com अनेसास: दिशानिर्देश – prabhab.com
Posted on March 25, 2020 March 25, 2020 /2बर्ष अगाडी / 1001 Viewed
✍️ डा. दुर्गा दाहाल
अनेसास अर्थात ‘अन्तर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज ‘ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको एउटा अन्तरराष्ट्रीय साहित्यिक संस्था हो । यो निरन्तर साहित्यिक मुर्धन्य व्यक्तित्व हरूदारा सिंचित, संरक्षित र पुष्पित संगठन हो ।
यसको आफ्नै गरिमा र अस्तित्व छ । यो एउटा अराजनैतिक र बहुआयामिक व्यक्तित्वहरू अँटाउने बौद्धिक र साहित्यिक संस्था हो । तदनुरूप, यो संस्था चल्नु पर्ने हो । यो फराकिलो हुनु पर्छ र सबैले साहित्यिक गतिविधिहरू गर्न पाउनु पर्छ ।
कुनै पनि संगठनहरूमा, घरदेखि लिएर राष्ट्रपति निवाससम्मका सबै संस्था र व्यक्तिहरूमा, जिम्मेवारीपन र पारदर्शिता हुनु पर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मानिसहरूमा विश्वास बढछ र यसप्रति सबैको आकर्षण बढछ ।
अनेसासमा विद्यमान नियम-कानूनहरू पनि परिमार्जित गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसमा खासगरि बोर्ड अव ट्रष्टी र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यविभाजन पनि निर्दिष्ट नभएको होला समय समयमा यिनीहरूको बीचमा शीतयुद्ध चलेको प्रतीत हुन्छ । यसको निराकरण अविलम्ब हुनु ज़रूरी छ ।
अनेसासका विद्यमान नीति/ नियमहरुको उल्लंघन गरि कार्यसमिति र बोर्ड अव ट्रष्टी दुवैले काम गरेको देखिन्छ ।
अबको पाँच महिना पछि चुनाव हुँदैछ । यसमा गुटबन्दी नगरौँ । यो अराजनैतिक र नाफारहित समाज भएकाले भरसक सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट एउटा उपयुक्त साहित्यिक व्यक्तित्वको खोजी गरौँ । चुनाव गर्दा दूरी बढछ र हारेको व्यक्ति र समूह टाढिन्छ ।
नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू गरौँ । विकसित ज्ञान र प्रविधि हरूलाई उपयोग र उपभोग गरौँ । त्यसैमा हाम्रो कल्याण हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाँजलि दिएर साहित्यसेवामा जुटौँ ।
नेपाली भाषा र साहित्यको विश्वव्यापी अनुवाद ज़रूरी छ । नेपाली कृति हरूलाई अंग्रेज़ी र अन्य भाषामा अनुवाद गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । हाम्रा सम्मेलनका पहिला दिनको प्रथम सत्रमा सबै भाषा -भाषीका साहित्यकार हरूलाई निम्त्याउन नबिर्सौँ ।
अब हामीले हरेक ठाऊँमा नेपाली सामुदायिक केन्द्र खोल्ने दिशामा अग्रसर भई त्यहाँ नेपाली पाठशाला, चिया- चमेना गृह, नेपालबाट आएका वृद्ध- वृद्धा हरूका लागि अनुकुल हुने गरि भेटघाट कक्ष आदि खोल्ने दिशामा स्थानीय संघ- संगठनसंग सहकार्य गरि अघि बढनु पर्छ । आँफूले सके धेरै राम्रो तर नसके अन्य संस्थाहरूसंग सहकार्य र सहयोगको दिशामा लम्कनु पर्छ ।
मलाई थाहा छ हाम्रो जस्तो समाजमा उल्लिखित कार्यहरू गर्न त्यति सजिलो छैन तर असंभव पनि हैन । ईच्छाशक्ति प्रबल भएको र योजनासहितको एउटा व्यक्ति आगामी चुनावमा सर्वसम्मतबाट हाम्रो समाजमा आयो भने अनेसासका सबै विसंगति र अनियमितताबाट मुक्त भई यसलाई उन्नत र अन्तराष्ट्रीय स्तरको लोकप्रिय समाज बनाउन सकछ ।
यी मेरा व्यक्तिगत विचारहरू हुन । कसैप्रति लक्षित नभई अनेसासको बृहत्तर स्वार्थका निम्ति अभिव्यक्त भएका हुन ।
प्रा. डा. दाहाल अनेसासका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन
स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिको चौथो बिश्व सम्मेलन सम्पन्न , अध्यक्षमा अर्याल सर्बसम्मत
स्याङजा कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा राजु थापा विजयी, गण्डकी प्रदेश सचेतक मल्ल पराजित
प्रेस युनियनकर्मी शिवाकोटीद्वारा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
अध्यक्षमा केपी ओली भारी मतले निर्वाचित, भीम रावलले ल्याए २१३ मत